Bit By Bit - Ukudala ukubambisana okukhulu - 5.4.2 PhotoCity
Amawebhusayithi afana ne-Flickr ne-Facebook anika amandla abantu ukuthi babelane ngezithombe nabangani nomndeni wabo, futhi bakhiqiza amakhophi amakhulu ezithombe ezingasetshenziselwa ezinye izinjongo. Isibonelo, uSameer Agarwal nozakwabo (2011) bazama ukusebenzisa lezi zithombe "Ukwakha iRoma ngosuku" ngokuphindaphinda izithombe eziyi-150,000 zaseRoma ukudala kabusha i-3D yedolobha. Kwezinye izakhiwo ezinkulu kakhulu-njenge-Coliseum (isibalo 5.10) -abacwaningi babephumelele kancane, kodwa ukuvuselelwa kwakunzima ngenxa yokuthi izithombe eziningi zithathwe ngezindlela ezifanayo zethando, zashiya izingxenye zezakhiwo zingabonakali. Ngakho-ke, izithombe ezivela kumakhomende ezithombe azanele. Kodwa kuthiwani uma izisebenzi zokuzithandela zingabhalwa ukuqoqa izithombe ezidingekayo ukuze zicebise labo asebevele betholakale? Uma ucabanga ngokufana nesithombe esahlukweni 1, kuthiwani uma izithombe ezilungisiwe zingasetshenziselwa izithombe zesitokisi?
Umdwebo 5.10: Ukuvuselelwa kwe-3D ye-Coliseum kusukela kusethi elikhulu lezithombe ezingu-2D kusukela kuphrojekthi "Ukwakha iRome Ngosuku." Amantathu angama-triangles amelela izindawo ezithathwe kuzo izithombe. Yenzelwe imvume evela ku-html version ye- Agarwal et al. (2011) .
Ukuze unike amandla ukuqoqwa okuhlosiwe kwezinombolo ezinkulu zezithombe, u-Kathleen Tuite nozakwabo bakhulise i-PhotoCity, umdlalo wokulayisha isithombe. I-PhotoCity iphendule umsebenzi onzima wokubamba idatha-ukulayisha izithombe-ukwenza umsebenzi ofana nomdlalo ohilela amaqembu, izinqaba, namafulege (isibalo 5.11), futhi saqala ukudala ukuvuselelwa kwe-3D yamanyuvesi amabili: i-Cornell University ne-University waseWashington. Abacwaningi baqale le nqubo ngokulayisha izithombe zezitshalo kusuka kwezinye izakhiwo. Khona-ke, abadlali kwikampus ngayinye bahlola isimo samanje sokuvuselela nokuthola amaphuzu ngokulayisha izithombe ezithuthukise kabusha. Isibonelo, uma ukuvuselelwa kwamanje kwebhulali le-Uris (e-Cornell) kwakunzima kakhulu, umdlali angathola amaphuzu ngokulayisha izithombe ezintsha. Izici ezimbili kule nqubo yokulayisha zibaluleke kakhulu. Okokuqala, inani lamaphoyinti umdlali owatholile lisekelwe esilinganisweni esitholwe isithombe sabo ekwakheni kabusha. Okwesibili, izithombe ezilayishiwe kwakudingeka zenzeke ngokubuyiswa kabusha okwamanje ukuze ziqinisekiswe. Ekugcineni, abacwaningi bakwazi ukudala imodeli enhle ye-3D yezakhiwo kuzo zombili izikhungo (isibalo 5.12).
Umfanekiso 5.11: I-PhotoCity iphendule umsebenzi onzima wokuqoqa idatha (okungukuthi, ukulayisha izithombe) futhi uyiphendule ibe ngumdlalo. Kuthiwe imvume evela ku- Tuite et al. (2011) , isibalo 2.
Umdwebo 5.12: Umdlalo we-PhotoCity unike amandla abacwaningi nabahlanganyeli ukudala izinhlobo ze-3D zezakhiwo eziphezulu ezisebenzisa izithombe ezilayishwe ngabahlanganyeli. Kuthiwe imvume evela ku- Tuite et al. (2011) , isibalo 8.
Ukuklama kwe-PhotoCity kuxazululwe izinkinga ezimbili ezivame ukuvela ekuqoqweni kwedatha okwabiwa: ukuqinisekiswa kwedatha kanye nesampuli. Okokuqala, izithombe ziqinisekisiwe ngokuziqhathanisa nezithombe zangaphambilini, ezazithola ziqhathaniswa nezithombe ezedlule kuze kube yilapho zibuyela ezithombeni zezitshalo ezazilayishwe abacwaningi. Ngamanye amazwi, ngenxa yalokhu kuhlanganiswa okwakhelwe ngaphakathi, kwakunzima kakhulu ukuthi othile alayishe isithombe sakhiwo esingalungile, noma ngengozi noma ngenhloso. Lesi sici sokuklama sisho ukuthi uhlelo luzivikele ngokwayo ngokumelene nedatha embi. Okwesibili, uhlelo lwabadlali abaqeqeshwe ngokwezemvelo ukuqoqa okuyigugu kakhulu-hhayi idatha elula kakhulu. Eqinisweni, nansi amanye amasu abadlali abachazwe ukuthi basebenzisa ukuze bathole amaphuzu amaningi, okulingana nokuqoqa idatha ebaluleke kakhulu (Tuite et al. 2011) :
Lezi zitatimende zibonisa ukuthi lapho abahlanganyeli behlinzekwa ngempendulo efanele, bangaba isazi ngempela ekuqoqeni idatha yentshisekelo kubacwaningi.
Ngokubanzi, iphrojekthi ye-PhotoCity ibonisa ukuthi isampuli kanye nekhwalithi yedatha akuzona izinkinga ezingenakulinganiswa ekuqoqweni kwedatha esatshalaliswe. Ngaphezu kwalokho, kubonisa ukuthi amaphrojekthi okuqoqwa kwedatha ayinqunyelwe emisebenzini abantu asebenayo kakade, njengokubukela izinyoni. Ngesakhiwo esihle, izisebenzi zokuzithandela zingakhuthazwa ukuba zenze ezinye izinto futhi.